Askari dil u geystay Gabar uu kala dhaxeeyay xiriir jaceyl - Awdinle Online
Askari dil u geystay Gabar uu kala dhaxeeyay xiriir jaceyl
Askari ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ku dilay Gabar kamid aheyd dadka deegaanka degmadaas.
Dad la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in dilka loo geystay Gabadha uu yimid, kadib muran kooban oo soo kala dhex-galay Askariga ka tirsan Ciidanka dowladda ee falkaas u geystay Gabadha.
Askariga ayaa waxaa la sheegay in Gabdha uu kala dhexeeyay xiriir ama haaseewe, bale muran is afgaar oo labadooda soo kala dhex-galay ayaa markii dambe sababay in Askariga uu carooday, kadibna uu rasaas dhowr ah Gabadha ku dhuftay.
Intaas kadib Askarigii falkaas geystay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana laamaha amniga dowladda ee degmada Balad-xaawo wadaan baaritaano kala duwan oo ku aadan sidii gacanta loogu dhigi lahaa Askarigii dilka geystay.
Dadka kunool degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa saakay aad u hadal haaya dhacdadaas gabdhaas uu ku dilay Askariga, iyagoo xiriir ama wada sheekeysi ka dhexeeyay.
Next articleShil khasaaro geystay oo ka dhacay Gobolka Mudug